Muxuu Fiqi ka yiri masaajidada xiran ee magaalada Guriceel? | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Muxuu Fiqi ka yiri masaajidada xiran ee magaalada Guriceel?
Muxuu Fiqi ka yiri masaajidada xiran ee magaalada Guriceel?
Wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug, Mudane Axmed Macallin Fiqi oo u warramayey warbaahinta ayaa ka hadlay Masaajidada xiran ee ku yaalla deegaanada maamulkaasi, gaar ahaan magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Fiqi ayaa sheegay in marka hore ay baaris ku sameyn doonaan waxa dhaliyey in la xiro goobahaasi loogu tala-galay in lagu cibaadeysto, kadibna ay la fariisan doonaan dhinacyada isku haya, gaar ahaan dadka diidan iyo kuwa raba in la furo Masaajidadaas oo horey ugu xirmay dagaalladii gobollada dhexe ku dhex-maray Ahlu Sunna Wal-Jamaaca iyo Al-Shabaab.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in ka wasiir ahaan uu isagu jelaan lahaa in la furo goobahaasi, si loogu cibaadeysto.
Axmed Macalin Fiqi oo hadakiisa sii wata ayaa xusay in Madaxweynaha Galmudug uu dhowaaan amar buuxa ka soo saari doono arrintaasi, kadibna la fulin doono.
Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyada oo muddooyinkii la soo dhaafay ay sii xoogeysaneysay dooda ka taagan dib u furida masaajidadaas oo ay xireen hoggaanka Ahlu Sunna Wal-Jamaaca ee ka talinayey gobollada Dhexe, waxaana arrintu ay si aad ah uga sii dartay markii Ahlu Sunna meesha laga saaray.
Guriceel waxaa sidoo kale ka dhacay dibad-baxyo iska horjeeda oo ay dhigeen dadka deegaanka oo qaarkood dalbanayey in la furo masaajida, halka kuwa kelana ay ka soo horjeedeen arrintaasi, taas oo sababtay in ciidamo la geeyo magaaladaasi.
Maqaal horeSawirro: Lafta Gareen oo kulan la qaatay odayaasha dhaqanka K/Galbeed
Maqaal XigaMaxaa hortaagan magacaabidda ra’iisul wasaare cusub?